EX - ABSDF: *** စကားပုံသုံးခု နှင်.မြန်မာ.နိ်ုင်ငံရေး ***
*** စကားပုံသုံးခု နှင်.မြန်မာ.နိ်ုင်ငံရေး ***
ငါးဆိုသည်မှာရေကိုအမှီပြု၍ နေရခြင်းဖြစ်သည် ။ သူတို.မီခိုအားထားရာ ရေ ပမာဏအနည်းအများကိုလိုက်၍ သူတို.၏လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုရသည် ။ ပင်လယ်ကြီးထဲတွင်နေရသော အခါ ဧရာမငါးကြီးတွေအဖြစ် လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာကျက်စားနိုင်ကြသည် ။ ပုလင်းကလေးတစ်လုံးထဲသို.ရောက်သွားသောငါးတစ်ကောင်မှာ မလှုပ်သာမလှည်.သာ ။ မြှုံးထဲ သို.ရောက်သွားသူ ကတော. နိဂုံးကမ္မတ်အဆုံးသတ်ဖို. မဝေးတော.ပြီ ။ ရေကန်ငယ်လေးထဲတွင် လဲနေရမည် ၊ မိမိရှင်သန်နေထိုင်ရာရေကန်သည်လည်းတစ်ဖြည်းဖြည်း အငွေ.ပျံချောက်သွေ. လာမည်ဆိုလျင် မူကားထိုကန်ထဲတွင်ဖြစ်ကြရသောငါးကလေးများ မှာ တထိတ်ထ်ိတ် တလန်.လန်.ဖြစ်နေရှာပေလိမ်.မည် ။
မိခင်မဲ.သွားသော လူမမယ် ကလေးသူငယ်တို.မှာလည်း ထိုသို.ပင်ရှိချေလိမ.်မည် ။သူတို.၏ အားကိုးရာ ၊ခိုလှုံရာသည် မိခင်ရင်ခွင်သာဖြစ်ရာ မိခင်မရှိတော.သော ကလေးတစ်ယောက်၏ ဘ၀ နှင်. ရေ မရှိတော.သော ကန်ထဲ၌ ဖြစ်ရသောငါးကလေးတွေဘ၀တူညီနေပေမည်။
မြန်မာ.နိုင်ငံရေးတွင် အမိနှင်.သော်၎င်း ၊ ရေနှင်.သော်၎င်း တူသည်ဟုသတ်မှတ်ကာပြည်သူလူထုကအားကိုးကြသည် မှာ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများဟုယုံကြည်ကြသော အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်များကိုဖြစ်သည် ။ အောက်ခြေမှ ပြည်သူလူထုခံစားနေရသော ဒုက္ခများကို ပြည်သူ.ကိုယ်စား အသံမြည်ပေးကြသူများအဖြစ်ထိုသူများကို အားထားခဲ.ကြပါသည် ။ တစ်ချိန်ကဆိုလျင် မြန်မာ.နိုင်ငံရေး၌ အတိုက်အခံတို. အလွန်ပင်အားကောင်းမောင်းသန်ရှိခဲ.ကြသည် ။ ပြည်ပသို.ရောက်နေကြသော N.L.D အပါအ၀င် ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများ၏ အသံသည်လည်းကောင်း ၊ပြည်တွင်းမှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ် (ထိုစဉ်ကအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင်. N.L.D ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတို.သည်လည်းကောင်း ၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များသည်လည်းကောင်း ၊ မတရားအသင်းသတ်မှတ်ခံထားရသော အသင်းအဖွဲ.အမျိုးမျိုးသည်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူလူထုရှေ.မှ မားမားမတ်မတ်ရပ်ကာ စစ်အစိုးရ၏ မတရားသောအမိန်.အာဏာများ ၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကို ရဲရဲဝံ.၀ံ. ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ.ကြသည် ။ မတရားဘူးထင်လျင် အချိန်မဆိုင်းပဲ ဆန်.ကျင်ကန်.ကွက်ခဲ.ကြသည် ။ ရက်ရက်စက်စက်ဖိနှိပ် တိုက်ခိုက်နေသည်.ကြားမှ ရုန်းထအံတုခဲ.ကြပါသည် ။ ထို.ကြောင်. ပြည်သူလူထုမှာ ဒီမိုကရေစီနှင်.လူ.အခွင်.အရေးကိုမရကြသေးသော်လည်း မိမိတို.ဘက်မှ ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်တည်မည်. အဖွဲ.အစည်းများရှိနေသေးသည်.အတွက် အားရကြေနပ်ခဲ.ကြပါသည် ။ စစ်အစိုးရကမကောင်းတာလုပ်သော်လည်း မကောင်းသည်ကိုမကောင်းဟု အော်မည်.သူများရှိနေခဲ.ကြပါသဖြင်.ဖြေသာပါသေးသည်။
ထိုအခင်းအကျင်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ.သော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကြီးအပြီးတွင် အင်အားချိန်ခွင်လျှာ ပြောင်းလဲသွားခဲ.ပါသည် ။ ပြည်သူလူထုဘက်မှ ကူပြောပေးမည်. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်မှာ လွှတ်တော် နှင်.ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ၏ မြောက်များလှသောနှောင်ကြိုးများဖြစ်. တဲနှောင်ခြင်.ခံလိုက်ရတော.သည် ။ ယခင်က ပြည်သူ.ရှေ.မှ ရဲရဲတောက်ရပ်တည်ခဲ.သော N.L.D မှာ ယခုအခါ ငြိမ်ချက်သားကောင်းလှသည် ။ ပြည်သူလူထု၏နစ်နာမှုများ မှာ မည်သူ.ကိုတိုင်တမ်းရမှန်းမသိတော.ပါ ။ ပြည်သူလူထု၏မျက်ရည်စများကို ကူသုတ်ပေးမည်. အတိုက်အခံအဖွဲ.အစည်းမရှိတော.ပါ ။ နိင်ငံရေးအဖွဲ.အစည်းအမျိုးမျိုးမှာလည်းအစိုးရနှင်. အပေးအယူတွေလုပ်လိုက်ကြလေပြီ ။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များမှာလည်း ယခင်က ပြတ်သားရဲဝံ.ကြသလောက် ယခုအခါတွေဝေယိမ်းယိုင်နေလေပြီ ။ နိုင်ငံရေးဆိုသည် မှာ ဆန်.ကျင်ဘက်ချည်းပဲလဲမဟုတ် အပြုသဘောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးလိုသည် ဟူသော်လည်း ရပ်တည်ချက် လုံးဝမတူသူများနှင်.အပေါ်ယံ ပြုံးပြနေကြခြင်းသည် ပြည်သူလူထုကတောင်.တနေသော အပြောင်းအလဲအစစ်မဟုတ်ကြောင်းသတိချပ်စေလိုပါသည် ။
။ချဉ်ဖတ်အိုးထဲသို.ကျသွားသောမုန်လာတစ်ဖတ်သည် အလိုလိုချဉ်ဖတ် ဘ၀ ရောက်သွားပေလိမ်.မည်။ အလုပ်သမား ၊လယ်သမား ၊ အခြေခံလူထုသည် သူတို.၏ လိုလားတောင်.တချက်များကို ကိုယ်စားပြု ဆောင်ရွက်ပေးမည်.အတိုက်အခံပျောက်ဆုံးနေသဖြင်. ဥစ္စာရင်လို ဥစ္စာရင်ခဲဟူသောသဘောနှင်. ကိုယ်တိုင်တောင်းဆို ၊ တိုက်ပွဲ ၀င်ရာမှ ဥပဒေမဲ.အစွန်းရောက် လုပ်ရပ်များဆီသို.မရည်ရွယ်ပဲရောက်ရှိသွားကာ နစ်နာသူများက ဥပဒေချိုးဖောက်သူများ ဖြစ်သွားရပြန်သည် ။ အလုပ်ပြုတ်သွားသော အလုပ်သမားများ ၊ လယ်ယာမဲ.သွားသော လယ်သမားများ ၊ မတရားသည်. အမိန်.အာဏာများကို လူထုကိုယ်စားရဲရဲဝံ.၀ံ.ယခင်လိုမရပ်တည်ကြသမျှ ပြည်သူလူထုမှာ အမိမဲ.သား ရေနည်းငါးဖြစ်နေကြဦးမည်ဖြစ်သည် ။
နောက်ထပ်မြန်မာ. နိုင်ငံရေးနှင်.ကိုက်ညီသော စကားပုံတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ။ ကျားကမသတ်ချင်၍ လွှတ်ပေးလိုက်ပါမှ အသက်ချမ်းသာရမည်.နွား၏ဖြစ်အင်သည် စိတ်ချလုံခြုံမှုကင်းမဲ.နေမည်ဖြစ်သည် ။ ကျားသည် စိတ်ကောင်းဝင်၍ (သို.မဟုတ် ) ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုမရှိသေး၍ လွှတ်ထားသော်လည်း ရန်မူချင်လာသောတစ်နေ.၀ယ် အချိန်မရွေးကိုက်သတ်ပစ်၍ ရလေသည် ။ နွား၏အသက်ရှင်သန်မှုမှာ ကျားအပေါ်လုံးလုံးတည်နေပေသည် ။ ယနေ.မြန်မာ.နိုင်ငံရေးကိုလေ.လာသုံးသပ် ကြည်.ပါကလည်းဤ အဖြစ် မျိုးပင်တွေ.ရပေမည် ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်၍ ပြည်သူများ နိုင်ငံအ၀ှန်းဘေးဒုက္ခရောက်နေစဉ်အတွင်း ၊ ဇွတ်အတင်း ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်၍ သူတို.ဘာသာအတည်ပြုလိုက်ကြသော ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ( ၅၈ )တွင် “နိုင်ငံတော်သမ္မတသည်မြန်မာနိင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံးတွင် နိုင်ငံသားအားလုံး၏အထွတ်အထိပ် နေရာရရှိသည် “ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အစိုးရအဖွဲ.ဖွဲ.ရာ၌ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ၊ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးများကို ခန်.အပ်ပိုင်ခွင်.မရှိပေ ။ ထိုရာထူးများကို တပ်မတော် မှ (်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မှ ) တိုက်ရိုက်ခန်.အပ်ခွင်.ပြုထားပေသည် ။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင် အဓိကကျသော လက်နက်ကိုင်ဝန်ကြီးဌာနများကို သမ္မကခန်.အပ်ခွင်.မရှိပဲ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးချုပ်လက်အောက်သို.ကျရောက်နေခြင်းဖြင်. မြန်မာနိုင်ငံ၏ဥပဒေစိုးမိုးရေး မှာ ကျားသနားမှ နွားချမ်းသာမည်.အဖြစ်သို.ဆိုက်နေပေတော.သည် ။ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းကြည်.ပါဦး ၊
အရေးပါသော ပြင်ဆင်ချက်များကိုပြုလုပ်လိုလျင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ပြင်ဆင်ရန် သဘောတူလက်ခံပါမှ နောက်တစ်ဆင်.ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပရဦးမည် ( ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃၆ (က)…….. ) ။ လွှတ်တော်၌ အများသိကြသည်.အတိုင်း ပြည်သူလူထု၏ မဲဆန္ဒဖြင်.မဟုတ်ပဲ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ အမိန်.အရ တိုက်ရိုက် ခန်.အပ်ထားသော တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေရာ လွှတ်တော်ထဲမှာရှိသမျှ ပါတီပေါင်းစုံမှ အမတ် အားလုံးတစ်ယောက်မကျန် ကထောက်ခံစေကာမူ တပ်မတော် သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကမထောက်ခံခဲ.လျင် မည်သို.မျှ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမကျော်သဖြင်. နောက်တစ်ဆင်.တက်၍ ရတော.မည်မဟုတ်ချေ ။ ဖွဲ.စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနှင်.ပါတ်သက်လာလျင် ဘယ်သူကဘယ်လောက်ပြင်ချင်သည်ဆိုစေ ကျားသနားမှ နွားချမ်းသာဆိုသလို တပ်မတော် စိတ်ကောင်းဝင်ပါမှ နောက်တစ်ဆင်.တက်နိုင်ရန် ရှိလေသည် ။ အကယ်စင်စစ် ၂၀၀၈ ဖွဲ. စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရေးဆွဲခဲ.တာပင် ပြင်ဆင်ရသလောက်မခက်ခဲခဲ.ပေ ။ ဆောက်တုန်းကလွယ်သလောက် ပြင်ဖို.မှခက်နေသော အိမ်တစ်လုံးနှင်.အလားသဏ္ဍန်တူနေပေသည် ။
နောက်တစ်ချက်ရှိသေးသည။် နိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုသော ခေါင်းစဉ်အောက် တွင် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင်.လုံခြုံရေးကောင်စီ ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင်.ဖွဲ.စည်းရမည်ဟု ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း(၅) ၊ပုဒ်မ ၂၀၁ တွင် လာရှိပြန်သည် ။ ထိုသူများမှာ
(ခ) ဒုတိယသမ္မတ (၁)
(ဂ) ဒုတိယသမ္မတ (၂)
(ဃ) ပြည်သူ.လွှတ်တော် ဥက္ကဌ
(င) အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌ
(ဋ) နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဟုပါရှိပေ၏ ။
အမှတ်တမဲ.ကြည်.လျင် ဒီမိုကရေစီကျသော အစုအဖွဲ.ဟုထင်စရာရှိသည် ။သေသေချာချာကြည်.လျင် ထိုကာ / လုံ အဖွဲ.တွင် လူ ( ၁၁ ) ယောက်ပါရှိ၏ ၊ ထို ၁၁ ယောက် တွင် ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးသည် တပ်မှလာသူဖြစ်သည် ၊ ကျန် (စ) ၊ ( ဆ) ၊ (ဇ) ၊ ( ည) ၊ ( ဋ) ငါးဦးသည် တပ်မှဖြစ်သည် ။ ၁၁ ယောက်တွင် (၆) ယောက်သည် တပ်မှတိုက်ရိုက်ရောက်နေသူများဖြစ်သည် ။ ကိစ္စကြီးငယ်ရှိ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်သောအခါ သမ္မတသည်ကံကောင်းပါမှ အလွန်ဆုံး (၅ ) မဲသာရမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘက်မှ ( ၆ ) မဲ မူသေ ရရှိထားပြီးဖြစ်သဖြင်. ကာ/လုံ အဖွဲ. ၏ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် သမ္မတ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ( ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ခဲ.လျင်သော်မှ ) တပ်မတော် ကာ /ချုပ် အားကျော်နိုင်မည်မဟုတ် ။ ထို.ကြောင်.ကျားသနားမှ နွားချမ်းသာမည်ဆိုသော စကားပုံအတိုင်းဖြစ်နေပေသည် ။
၃။ အမယ်ဘုတ်ရဲ. သူ.ချည်ခင်
မြန်မာ.နိုင်ငံရေးနှင်.အလိုက်ဖက်ဆုံးသော စကားပုံမှာ ဤ စကားပုံဖြစ်သည် ။ အဖွားအိုတစ်ဦးသည် ဗိုင်းငင်ရင်း၊ ချည်မျှင် အထုံးတစ်ထုံးနှင်.အလုပ်ရှုပ်နေသည် ။ချည်စတွေသည် ရှုပ်ထွေးကုန်သဖြင်. ဘယ်ဟာ အစ ၊ ဘယ်ဟာ အဆုံးဟု သူမခွဲတတ်တော. ။ ဟိုအစ ကိုဆွဲထုတ်တော.သည် တစ်စက ပါလာသည် ။ သည် အစွန်းကိုဆွဲထုတ်တော. ဟိုဘက်ချည်စနှင်.ငြိနေသည် ။ ရှင်းရင်းရှင်းရင်း လုံးလည်ချာပါတ်လိုက်ကာ ကြာလေရှုပ်လေ ၊ ရှင်းလေ ပွလေဖြစ်နေသည် ။ အမယ်ဘုတ်သည် သူ.အရှုပ်ကိုသူမရှင်းတတ်တော. ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း သည်အတိုင်းဖြစ်နေသည် ။ လယ်ယာမြေတွေမတရားသိမ်းခံထားရပါသည် ဟု လယ်သမား ၊ ယာသမားတွေက အော်သည် ။ သွားကြည်.တော. ပိုင်ရှင်မှာ လွှတ်တော် အမတ်မင်း ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေသည် ။ နောက်တစ်ခါ မြေယာ တွေ မတရားသိမ်းခံရမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးကြပြန်သည် ။ သိမ်းထားသူမှာ တပ်မတော်မှဖြစ်နေသည် ။ ဤ ကြိုးစ နှစ်စသည် ရှင်း၍ ရ မည်မဟုတ်သဖြင်. ပြန်ချထားလိုက်ကြသည် ။ မချလို.လဲမရ ခရိုနီ လွှတ်တော် အမတ်မင်းတစ်ဦးက သူ.မြေကိစ္စကို အရေးယူလျင် ၁၉၈၈ မှ ၂၀၁၀ အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ.သော အခြား မြေသိမ်း ယာသိမ်းကိစ္စတွေကိုရော ဘယ်လိုအရေးယူမည်နည်းဟုမေးတော. ဟိုလိုလို သည်လိုလိုတွေဖြစ်ကုန်ကြသည် ။ ဒါဆို အစိုးရ အဖွဲ.၀င်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စာ ရင်း ကို အများပြည်သူသိအောင်ချပြကြေးဆိုသော ကြိုးစကို တစ်ယောက်ကဆွဲထုတ်သည် ။ ထိုအခါ အစိုးရအဖွဲ.က သူတို.၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အများသိအောင် ကြေငြာ ကြစတမ်းဆိုလျင် လွှတ်တော် အမတ်မင်းများကလည်း သူတို.နည်းတူ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထုတ်ဖော်ကြေငြာရမည် ဟု အစွန်းတစ်ဖက်ကိုဆွဲလိုက်ရာထိုကိစ္စမှာ Gone with the wind ဆိုသော ၀တ္တုစာအုပ်ကြီးလို “ လေနှင်.အတူလွင်.ပါသွားသည် “ ။ ဒါဆို အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ကြမယ် ဟုအစတစ်စ ဆွဲထုတ်ပြသည် ။ အဂတိလိုက်စားမှု ကြိုးစများစွာထဲမှ ၂၀၁၀ အစိုးရအသစ် သို.အာဏာလွှဲပြောင်းမပေးမီ နိုင်ငံတော်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင်. စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ၊မြေနေရာများကို ခြေသွက်လက်သွက် ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ကြသောကိစ္စကို ရှင်းဖို.ဆွဲထုတ်ကြည်.မိသည် ။ ပုဂ္ဂလိက သို. လွဲပေးသူများမှာ စစ်အစိုးရလက်ထက် မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဖြစ်သည် ။အလွှဲခံရသူ ( ရသွားသူ ) များ ကိုကြည်.လိုက်သောအခါ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ၊ ၀န်ကြီးများ၏ သားသမီးများ ဖြင်.ဖွဲ.စည်းထားသောကုမ္မဏီများ ၊ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၏ လူယုံတော်များ ၊စီးပွားရေး ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်နေသဖြင်. အမယ်ဘုတ်၏ ကြိုးစတစ်မျှင်ကို ကမန်းကတန်း လွှတ်ချလိုက်ကြသည် ။
စီးပွားရေးသမားများချမ်းသာကြွယ်ဝလာခြင်းမှာမဆန်းသော်လည်း လခစားဖြစ်သော တပ်မတော်သားများ ချမ်းသာကြွယ်ဝလာကြပုံမှာ ဆန်းသည် ။ သူတို.သည် အာဏာလက်ရှိနေစဉ်တွင် နီးစပ်ရာ ဆွေမျိုးသားချင်း ကုမ္မဏီများ ၊ တပည်.တပန်း များ ၊ ကိုယ်စားလှယ်များကို အာဏာနှင်.လုပ်ပိုင်ခွင်.ကို တလွဲသုံးခဲ.ခြင်းရှိမရှိ ၊ နိုင်ငံ. ဘဏ္ဍာ များကို မိမိ အိပ်ထောင်ထဲသို. ထည်.ခဲ.ခြင်းရှိမရှိ ဆိုသော ကြိုးစ မှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော်လည်း ကြိုး၏အဆုံးမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်ကြိုးများလွှတ်ထားသဖြင်. ထိတွေ.ကိုင်တွယ်၍ မရ ။ ကိုင်သူဓါတ်လိုက်မည်ဖြစ်သည် ။ မြန်မာ.နိုင်ငံရေးတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သည်ကိုယ်တိုင်လဲ စီးပွားရေးမလုပ်ခဲ. ၊ အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ကာ မည်သည်.စီးပွားရေးသမားနှင်.မှလည်းမပူးပေါင်းခဲ .။ ထို.ကြောင်. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကွယ်လွန်တော. စုပြီးဆောင်းပြီး ဘာမှမကျန်သဖြင်. ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်သည် နဂိုအလုပ်ဖြစ်သော သူနာပြုဆရာမအလုပ်ကိုပြန်လုပ်ဖို.ပင် စီမံခဲ.သည် ။ နောင်မှ ဖ.ဆ.ပ.လ ခေါင်းဆောင်များထိုအဖြစ်ကိုသိကာ ကူညီစောင်.ရှောက်ခဲ.ကြရသည် ။ ဦးနုလက်ထက်တွင်လည်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု၏ သားသမီးများ ဖခင်၏အရှိန်အ၀ါကိုအသုံးပြုကာ ကုမ္မဏီထောင် စီးပွားရေးလုပ်သည်ဟု မကြားဖူးပေ ။ နိုင်ငံ.လွတ်လပ်ရေးအတွက် အတူတူ အသက်ပေး၍ လုပ်ခဲ.ကြသော သခင်သန်းထွန်း ၊ သခင်စိုးတို.သည်လည်း ကုမ္မဏီထောင်သည်ဟုမကြားဖူး ၊ ယုတ်စွအဆုံး ဂဠုန် ဦးစောသော် မှလည်း ထိုသို. ခရိုနီစီးပွားရေးကိုမကျင်.သုံးခဲ. ။
ဦးစော သည် သူကျူးလွန်ခဲ.သောမကောင်းမှုအတွက် အပြစ်ဒဏ်ကို ယောက်ကျားပီပီ ခံယူသွားသည် ။ အတိတ်က အဖြစ်များသည် ယခုခေတ်မှာလို ရှင်းမရအောင်ရှုပ်နေသော အမှုများမရှိ ။ ယခုအခါ ရှင်းမရသော ချည်ထုံးကြီးကဲ.သို. ဖြစ်နေသော ကိစ္စများစွာရှိသည် ။ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်း ၊စိမ်းလဲ.ကန်သာ ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု ၊ ပြည်န၀ဒေးတံတားအောက်မှ စုံတွဲတွင် ယောက်ကျားလေးအသတ်ခံရပြီး မိန်းကလေးကိုသေလုမျောပါးရိုက်နှက်ခံရမှု ၊ စီးပွားရေးလက်ဝါးကြီးအုပ်မှု ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ၊အကျင်.ပျက်ခြစားမှု ၊ အာဏာအလွဲသုံးစားမှု၊အခွန်တိမ်းရှောင်မှု ၊ ငွေမည်းကိုခ၀ါချမှု ၊ရွေးကောက်ပွဲမသမာမှု စသည်. ကြိုးစမျှင်များသည် ဟိုမှသည်မှ ပေါ်လာကြသော်လည်း ကြိုးစ၏ အဆုံးအထိလိုက်ခြင်းငှာ မ၀ံ.မရဲကြသည်ဖြစ်၍ အမယ်ဘုတ်သာရှိသေးလျင် “ ဟဲ. ငါ.ချည် ထုပ်ထက်နင်တို.ကပိုရှုပ်နေပါလား “ ဟု ပြောမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ ပင်ဖြစ်ပါကြောင်း ။
Posted by lu bo at 11:56 PM